Dreame V9, पैसा भ्याकुम क्लीनरको लागि उत्कृष्ट मूल्य ग्याजेट समाचार
Dreame V9, एक वैक्यूम क्लीनर पैसाको लागि उत्कृष्ट मूल्य संग
यो धेरै लामो समय भएको छ किनकि हामीसँग हाम्रा घरहरू, स्मार्ट रोबोटहरू, हातले भ्याक्यूम क्लीनरहरू सफा गर्नका लागि समर्पित उत्पादनहरू थिए। तपाइँलाई थाहा छ कि यहाँ हामी तपाइँलाई तपाइँको घर स्मार्ट बनाउन मद्दत गर्दछौं ताकि तपाइँ तपाइँको फ्रि समयको अधिकतम उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यस पटक हामी बहुमुखी हात भ्याकुम क्लीनरहरूको बारेमा कुरा गर्ने छौं।
हामीसँग विश्लेषण तालिकामा छ Dreame V9, एक ह्यान्डहेल्ड वैक्यूम क्लीनर सामान र राम्रो शक्तिले भरिएको छ कि बजारमा पैसा को लागी सबै भन्दा राम्रो मूल्य को एक बन्छ। तपाईंले पक्कै पनि यो वैक्यूम क्लीनरको बारेमा धेरै चोटि सुन्नुभएको छ, त्यसैले यसको शक्तिहरू, र यसको कमजोरीहरू पनि जान्नु राम्रो समय हो।
1 डिजाइन र निर्माण सामग्री
2 प्राविधिक विशेषताहरु र आकांक्षा
3 स्वायत्तता, सफाई र फिल्टरि। मोडहरू
4 सामान र स्पेयर पार्ट्स
डिजाइन र निर्माण सामग्री
डिजाईनको सन्दर्भमा सपना उसले व्यावहारिक रूपमा केहि जोखिम उठाएको छ। तर निस्सन्देह कि हामी के कुरा गर्न जाँदैछौं भनेको सामग्रीहरू हुन्, हामीसँग लगभग सबै सामग्रीका लागि पर्याप्त पातलो म्याट सेतो प्लास्टिक छ, जसमा ब्रश गरिएको एल्युमिनियममा केही निश्चित चीजहरू छन्। यो तुलनात्मक रूपमा थोरै तौल गर्दछ यदि हामी यसलाई प्रतिस्पर्धासँग तुलना गर्छौं, यसले हामीलाई यस्तो भावना दिन्छ कि यदि यो प्रयोगको पर्याप्त उचाइबाट खस्यो भने हामी उपकरणमा अपूरणीय क्षति हुन सक्छ। यो उत्पादनहरूसँग एक मुख्य भिन्नता हो जुन दुई गुणा बढी खर्च हुन सक्दछ। सामानको सर्तमा सामग्रीको बारेमा कुरा गरौं:
दुई-इन-एक स्लिम ब्रश
मोटरसाइज ब्रशको साथ सोफा र पर्दाका लागि निर्दिष्ट टाउको
बहुउद्देश्यीय मोटर चालक रोलर ब्रूम हेड
चार्जिंग र सामानहरूको लागि समर्थन
विस्तार (ब्रशेस प्रयोग गर्न)
यद्यपि, प्रयोगमा हामीले सामग्रीहरूमा कुनै नकारात्मक बिन्दु फेला पारेनौं, तिनीहरू राम्रोसँग फिट हुन्छन्, नृत्य गर्दैनन् र धेरै राम्रोसँग स्थिर भएको देखिन्छ। थप रूपमा, यो सीधा पनी निश्चित एसिसिएबल शाओमी उत्पादनहरूको डिजाइनबाट। म निश्चित रूपमा निर्माणको साथ सहज छ र यो प्रस्ताव गरिएको minimalist डिजाइनको साथ।
प्राविधिक विशेषताहरु र आकांक्षा
यस प्रकारको उत्पादनको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष मध्ये एक सक्शन पावर हो, र त्यो यो हो कि केहि उत्पादनहरू यस्तै तर आश्चर्यजनक रूपमा कम मूल्यको साथ एक नकारात्मक पक्ष हो जसले उनीहरूलाई लगभग बेकार, कम चूषण शक्ति बनाउँछ। हामी यसमा भर पर्दछौं Dreame V9 एक शक्ति २२,००० Pa, घरको सबै पक्षमा गहिरो सफा गर्न पर्याप्त छ। हामी सहमत छौं कि यसले अन्य उच्च-अन्त्यमा पुग्न सक्दैन, तर यसको लागत यसको आधा भन्दा आधा हुन्छ। हामीले यो कुरा मनमा राख्नुपर्दछ कि हामीसँग १.० किलोग्राममा १२० AW को पावर छ जुन कुल उत्पादको तौल हो।
AMAZON> LINK मा सपना V9 खरीद गर्नुहोस्
जम्मा को लागि, धेरै महत्त्वपूर्ण, हामी आधा लिटर (०.०L), सजिलैसँग खोल्न सकिने प्रणालीको साथ कि केवल एक बटन थिच्नाले सम्पूर्ण फोहोर खस्नेछ, जसले मर्मत सहयोग गर्दछ। यो केहि चीज हो जुन यो अन्य ब्रान्डको उत्पादन भन्दा अगाडि छ र यसले मलाई यसको दैनिक प्रयोगमा विश्वस्त तुल्याएको छ। ट्या tank्की पारदर्शी छ त्यसैले हामी यसको सामग्रीहरू सजिलैसँग अवलोकन गर्न सक्दछौं, यसको खाली आवश्यकताहरूको कल्पना गर्न, यद्यपि म प्रत्येक प्रयोगमा फोहोर हटाउने सल्लाह दिन्छु।
स्वायत्तता, सफाई र फिल्टरि। मोडहरू
यो उपकरणको एक छ २,2.500०० एमएएच ब्याट्री जसले हामीलाई न्यूनतम स्तरमा of० मिनेट प्रयोग गर्दछ, मध्यम मोडमा minutes० मिनेट र अधिकतम सक्सन मोडमा १० मिनेट। यस लिथियम आयन ब्याट्रीमा एक प्रणाली छ जसले हामीलाई यो प्रतिस्थापन गर्न अनुमति दिनेछ यदि हामी थोरै "ट्रिक" हो भने यसलाई अमेजन वा एलिप्रेसप्रेस जस्ता पोर्टलहरूमा खरीद गर्दै छौं। यसले यसको उपयोगी जीवनलाई विस्तारपूर्वक विस्तार गर्दछ, केहि ब्रान्डले यसलाई अनुमति दिदैन। निश्चित रूपमा समय कि भ्याकुम क्लीनर ब्याट्री को प्रदर्शन द्वारा विशेष गरी सीमित छैन।
न्यूनतम मोड: minutes० मिनेट
मध्यवर्ती मोड: minutes० मिनेट
अधिकतम मोड: १० मिनेट
हामीसँग सूचक छ आधारमा एलईडी जसले हामीलाई जुनसुकै बेला चार्ज लेभलको बारेमा सूचित गर्नेछ, जब हामी यसलाई प्रयोग गर्दछौं, साथै लोडिंग प्रक्रिया जब यसको आधारमा आवाश्यक हुन्छ। हामीले यसको आधार चार्ज गर्न आवश्यक छैन। केहि हाइलाइट गर्न, हामी सिधा केबल मार्फत Dreame V9 चार्ज गर्न सक्षम हुनेछौं। कुल चार्जिंग समय लगभग hours घण्टा हुनेछ यदि हामी ०% बाट १०० %मा जान्छौं भने।
फिल्टरिंगको सन्दर्भमा हामीसँग पाँच टks्कहरूको एउटा प्रणालीमा अन्त्य हुने छ HEPA फिल्टर एक आधा थ्रेड प्रणाली को माध्यम द्वारा शीर्ष मा हटाउन र प्रतिस्थापन गर्न सजिलो। यो एक ग्यारेन्टी हो जुन सपना अनुसार यो% 99% निस्पंदन प्रदान गर्दछ। हाम्रो परीक्षणहरूमा हामीले यो देख्यौं कि यसले सन्तुष्ट हुँदैन वा धुलो कणलाई फर्काउँदैन कोठामा, यस्तो चीज जुन यो उच्च श्रेणीहरूका समान उत्पादहरूसँग पनि तुलनात्मक छ।
सामान र स्पेयर पार्ट्स
यो फिल्टर पनि सजिलैसँग प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ, साथ साथै एडप्टरको रोलरहरू जुन हामीले पहिले कुरा गरेका थियौं। यो अत्यन्त महत्त्वको छ, अमेजन र एलिप्रेसप्रेस जस्ता पोर्टलहरूमा हामी दुवै ब्रश र HEPA फिल्टर सजीलै पाउन सक्दछौं। फेरि यो सपना V9 बहुमुखी बनाउँछ र टिका लागि डिजाइन।
तपाईंलाई यो मन पर्यो? यसलाई उत्तम मूल्यमा खरीद गर्नुहोस्! > AMAZON
भ्याकुम क्लीनर तुलनात्मक रूपमा शान्त छ, हामीसँग अधिकतम पावरमा dec० डेसिबल सम्मको अधिकतम आवाज छ, जुन हामी नियमित रूपमा प्रयोग गर्न गइरहेका छौं त्यो होईन, त्यसकारण बाँकी विकल्पहरू धेरै शान्त हुन्छन्, फेरि परिणामहरू प्रस्तुत गर्दछ जुन उच्च दायराको सर्तमा प्रतिस्पर्धासँग मिल्दोजुल्दो छ। यसको ब्रशेसको शक्ति पनि महत्त्वपूर्ण छ, तिनीहरू स्वतन्त्र रूपले अघि बढ्छन्, यद्यपि एक एलईडी बत्ती प्रणाली हराइरहेको छ सजिलै टाढाबाट मैला पहिचान गर्न, यो केहि सकारात्मक बिन्दु हुने थियो।
यो Dreame V9 उच्च-अन्तमा हेन्डहेल्ड वैक्यूम क्लीनरको महत्वपूर्ण विकल्पको रूपमा स्थित छ। व्यक्तिगत रूपमा, म केहि अफरहरू तल १०० यूरोहरू खण्डन गर्दछु जुन बजारमा छ र जुन सजिलैसँग धेरै बिक्री पोर्टलहरूमा नकारात्मक समीक्षाको साथ फेला पर्दछ। यो Dreame V9 को आधार मूल्य १ 199 150 यूरो छ, तर तपाईं सजिलैसँग १ 160० वा १ XNUMX० यूरोमा यसलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। (खरीद गर्नुहोस् LINK) विशेष प्रस्तावहरूमा आधारित छ, जुन यो हो जब म तपाईं सिफारिस गर्दछ तपाईं उत्पादन प्राप्त। यो पक्कै पनि मलाई एक गोल उत्पादन जस्तो देखिन्थ्यो, विशेष गरी यस्तै प्रकारको उत्पादनहरू जुन हाम्रो हातहरू मार्फत पारियो र यो Dreame V9 को मूल्यलाई ध्यानमा राख्दै।
शक्ति र सामानहरू
पैसाको लागि मूल्य
झरनाबाट सम्भावित क्षति
झाडूमा एलईडी छैन
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » Dreame V9, एक वैक्यूम क्लीनर पैसाको लागि उत्कृष्ट मूल्य संग
क्रसकाल ट्रेकर-एक्स an एक अफ-रोड स्मार्टफोन
शाओमी रेडमी नोट Pro प्रो, धेरै सद्गुण र केहि कमी [समीक्षा]